Propars Blog: Wax kasta oo ku saabsan ganacsiga E-commerce! | Propars E-Dhoofinta
Propars Blog: Wax walba oo ku saabsan ganacsiga E-commerce!
Waa maxay Mas'uuliyadda Soo-saareyaasha Kobciyay Amazon (EPR)?
Amazon, oo ah goobta ugu weyn e-ganacsiga e-commerce, ayaa horay loogu dhawaaqay in 2022, iibiyeyaasheeda ay wanaajin doonaan mas'uuliyadooda ku saabsan Mas'uuliyadda Soo-saareyaasha La Wanaajiyey (EPR). Gaar ahaan deegaanka Jarmalka iyo Faransiiska...
Warbixinta Ganacsiga E-Ganacsiga ee Yurub 2021
Haddaanu nahay kooxda Propars, waxaanu idiinku soo ururinay wixii ka dhacay suuqa e-ganacsiga Yurub ee 2021, kaas oo aanu dhawaan ka tagnay.
Sida Dibadda Loo Iibiyo?
Dunida casriga ah iyo isticmaalka baahsan ee internetka, hadda waxaa suurtogal ah in ganacsi kastaa uu iibiyo dibadda. Gaadhsiinta macaamiil badan, ku qiimaynta wax soo saarkeeda marka la eego TL iibka lacagaha qalaad, iyo furitaanka suuqyo cusub...
Waa maxay Omnichannel iyo Multichannel Marketing? Keebaa Waxtarka badan u leh Goobtaada Shaqada?
In kasta oo Omnichannel iyo Multichannel marketing loo tarjumo Turkiga sidii suuqgeyn dhinacyo badan leh, haddana waa erayo kala duwan. Fahamka farqiga u dhexeeya labadan fikradood iyo la qabsiga goobtaada shaqada sida ugu habboon waa shirkaddaada ...
Ku guulaysato Iibka Lacagahaaga, Dahabka iyo Dheeman Jewelry ee Ganacsiga E-commerce!
Ka dib markaad akhrido maqaalkan waxaan kuu diyaarinay, waxaad heli doontaa dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah si aad u abuurto dukaankaaga dahabka online, maareyso oo suuqgeyn dahabkaaga qalinka, dahabka iyo dheemanka. Waa maxay sababta qaybta dahabka...
Xeerarka cusub ee VAT (VAT) ee Midowga Yurub / Waa maxay iOS iyo OSS?
Dhamaadka 2020, Komishanka Yurub wuxuu go'aansaday inuu dib u dhigo xeerarka cusub ee VAT (VAT), kaas oo la filayay inuu dhaqan galo Janaayo 1, 19 Luulyo 1, 2021 masiibada Covid-XNUMX awgeed. Wadamada uu ka jiro Corona...
Sida Loo Iibiyo Goobta Rajada?
Mawduucyada aan ku dabooleyno boostadayada blog-ka, halkaas oo aan kuu sheegayno waxaad u baahan tahay inaad ogaato si aad wax uga iibiso barta Wish, oo ah mid ka mid ah suuqyada ugu weyn ee e-ganacsiga e-commerce ee ka gudba USA ilaa Yurub; Waa maxay rabitaan? jeclaan...
Amazon Prime Day: Talooyin Iibiyeyaasha
Dhawr maalmood ayaa ka hadhay dhacdada Amazon Prime Day, taas oo sannad kasta la qabto adduunka oo dhan oo socota laba maalmood. Ololaha la qabanayo 21-22 June ee sanadkan, ayuu Ra'iisul...
Sidee E-Dhoofinta Loogu Geynayaa Mexico?
Mawduucyada aan kaga hadalnay boostadayada blog-ka, oo aan u diyaarinay inay u adeegaan sidii khariidad loogu talagalay kuwa doonaya inay u dhoofiyaan Mexico, taas oo la socota guusha Ameerika iyo Kanada ee ganacsiga e-commerce; Mugga ganacsiga E-commerce ee Mexico waa kan ugu badan Mexico...
Ebay Waxay Ku Heshiisay Payoneer Habka Lacag Bixinta!
Warka wanaagsan ee iibiyeyaasha! Dhibaatada PayPal waxay ka luntay Ebay, mid ka mid ah meelaha ugu horreeya adduunka. Natiijadu waxay tahay ku darista Payoneer ikhtiyaarkeeda lacag bixinta, ebay waxay kuugu dartay Payoneer akoonkaaga iibiyaha.
Wax kasta oo aad uga baahan tahay E-commerce!
Isbeddellada Ganacsiga E-commerce 1
Falanqaynta Qaybta 1
Goobaha suuqyada 5
Falanqaynta Dalka 3
Copyright © Propars Blog: Wax walba oo ku saabsan ganacsiga E-commerce!. 2022 • Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin.
Koala WordPress Theme by EckoThemes. La daabacay WordPress.